Apple Watch Series 7 wuxuu bixiyaa wareejinta xogta wireless 60,5 GHz laakiin ma furna | Wararka IPhone
Tani waa mid ka mid ah astaamaha lagu daray taxanaha Apple Watch 7 oo lagu daadiyey dukumintiga FCC. Wararka ka imanaya gacanta MacRumors waxay tilmaamaysaa in Taxanaha 7 uu bixinayo ikhtiyaar wareejinta xogta 60,5 GHz. Doorashadan ma aha mid u furan dhammaan isticmaalayaasha. isticmaalka gaarka ah ee shaqaalaha Apple.
Xiriirintani waxay bixisaa gudbiyaha 60,5 GHz wuxuu u baahan yahay "dekedda serial wireless" patent -ka ay leedahay Apple oo leh xiriir USB C oo kaliya shaqaalaha Apple ayaa u muuqda inay xogta u diraan smartwatch. Dareenkan, ma jiraan faahfaahin aad u badan oo ku saabsan hawlgalka gudbinta xogtan inkasta oo ay run tahay inaanan sidoo kale adeegsan doonin.
Waa saldhig u oggolaanaya wareejinta xogta Apple Watch Series 7
Filtration muujinaysaa saldhig leh lambar taxane A2687 oo sidaan hore u sheegnay waxay ku shaqaysaa deked USB-C. Xiriirka ka dhexeeya saldhigga iyo saacadda lafteeda waxaa sameeya birlabyo sida saldhigyada lacag -bixinta ee Apple Watch.
EUT waxay ka kooban tahay aaladda gacanta ee Apple Watch oo ay ku jirto modul-gudbiyaha xogta 60,5 GHz ee aan lahayn shatiga / liisanka. Saldhig silsilad silsilad ah oo lahaansho leh oo leh modul 60,5 GHz ah ayaa loo baahan yahay si loogu oggolaado qulqulka Apple Watch. Aalad isku -dheelitirka magnetka ayaa ku xiraya Apple Watch meesha sare ee saldhigga wireless -ka ee taxanaha ah, taasoo u oggolaaneysa isgaarsiinta u dhexeysa saldhigga iyo Apple Watch. Saldhigga taxanaha ah ee wireless-ka waxaa ku shaqeeya deked USB-C.
Dukumiintiga ayaa soo daatay oo ay baahisay warbaahintu taariikhdu markay ahayd dhammaadkii bishii Ogosto iyos Falanqeeyayaasha Barclays Blayne Curtis iyo Tom O'Malley, waxay ahaayeen kuwii xogta sii daayay. Saldhiggan, sida lagu sharraxay dhexda, xiriirku wuxuu oggolaanayaa in xogta lagu wareejiyo illaa 480 Mbps, taas oo la mid ah xawaaraha USB 2.0. Waxaa laga yaabaa in Apple ay rabto inay hesho macluumaadka aaladda iyada oo aan u isticmaalin dekadda ku jirta daloolka gudaha suumanka, iyadoo tan ay u fududaan lahayd helitaanka saacadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch Series 7 waxay bixisaa 60,5 GHz wareejinta xogta wireless laakiin ma furna
Apple ayaa sii deysay Raad -raacii Koowaad ee Taxanaha Duulaanka